အမှတ်တရ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 16 February 2011 16 February 2011 Categories Recounts
8 thoughts on “အမှတ်တရ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅”
16 February 2011 at 4:34 am
Sometime you can’t judgedabook byaname of author or the title of the book. 😉
16 February 2011 at 5:25 am
အဘွားစာဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။ ဆရာ နာမည်ပြောင်းဖို့မစဉ်းစားဘူးလား ဟီးဟီး။
16 February 2011 at 7:58 am
ဆရာရေ… မေတ္တာကျော် လို့ နာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုလည်း ကြော်ငြာ်များများ ထည့်ပါဦးခင်ဗျာ… 🙂 တော်ကြာ စာရေးဆရာ အသစ်တစ်ယောက်လို့ ထင်နေမှာ စိုးလို့.. 🙂
ကျွန်မ ဆိုဆြာ့ရဲ့ အတ္တကျော် ဆိုတဲ့ကလောင်ကို စပီး စိတ်ဝင်စားမိလို့ ဆြာ့စာတွေကို စဖတ်မိတာ ။ ဆူဒိုနင်ဆိုတဲံ့ကလောင်ကို လည်းအဲလို ပဲ နာမည်ပေးထားတာ ထူးဆန်းလို့ စဖတ်တာ ။ပီးမှ တယောက်တည်းမှန်းသိတာ ၊ ဆွဲဆောင်မှု ၇ှိတယ် ဆြာပေးထားတဲ့ နာမည် တွေ က ၊ အတ္တကျော် ဆိုတာကိုတော့ ဆြာအနက်ဖွင့်ပြလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ် ၊ဆူဒိုနင်ဆိုတော့ ဘယ်လိုအနက်ရှိလဲ မသိသေး ဘူး ၊
16 February 2011 at 12:50 pm
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ… ဆူဒိုနင်ရဲ့ အနက်ကို https://atkbooks.wordpress.com/2009/09/05/who-dares/ မှာ ဖွင့်ဆိုပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းပါ။
ဆရာရှင်းပြထားတဲ့ သဘောအရဆိုရင်တော့ အတ္တ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သီးသန့်ယူပြီးမှ ဆရာ့အမည်ရင်းက ကျော် ကို ထည့်ပေါင်းထားသလို နားလည်မိပါတယ်။
ပမာအားဖြင့် အခကြေးငွေ မယူဘဲ လူမှုရေးအတိုင်ပင်ခံ ဆွေးနွေးပေးတာမျိုးကိုကြည့်ရင်
အတ္တကို ကျော်လွန်သူ လို့ ရိုးရိုးတွေးပြီး နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရင်ကော ဆရာ့ကို မြှောက်ပင့်လွန်းရာကျနေမလားပဲ…
(အဖွားဒေါ်တင်တင်ရီ ပြောတဲ့ မေတ္တာကျော် တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာ။ ကျွန်တော်တို့ — တရား ပွားများနေရပါဦးမယ်း)
17 February 2011 at 4:51 pm
နာမည်ပြောင်းရင် ဖိတ်အုန်းနော် ဟီဟိ 😛
18 February 2011 at 11:45 pm
အဘွားပြောတာတွေကုို ကြိုက်တယ်ဆ၇ာ…. ကျမငယ်ကတည်းက စာဖတ်ဝါသနာ အရမ်းပါခဲ့ပြီး…. စာပေါင်းစုံ ဖတ်ခဲ့တာ….. စာဖတ်ချင်စိတ်ပျောက်အောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာတွေက သူတို့ပါပဲ…..
Previous Previous post: ဂျီကျတတ်တဲ့ ချစ်သူရဲ့ အမော
Next Next post: ကွန်မန့်ရေးတတ်ကြရဲ့လား